बुलिश शेयरबजारका ट्रेन्डिङ कम्पनी
बजारमा १० कम्पनीको वर्चस्व
ट्रेन्डिङ भन्नाले हालै प्रख्यात रहेको, चर्चामा रहेको वा त्यसबारे धेरै कुरा गरिएको वा हेरिएको वा खोजिएको विषयवस्तु भन्ने बुझिन्छ । विशेषतः इन्टरनेटमा वा अनलाइनमा कुनै विषयवस्तु तत्कालमा भाइरल भएमा ट्रेडिङमा परेको भन्ने गरिन्छ । जसरी इन्टरनेटमा सबै विषयवस्तु ट्रेन्डिङमा पर्दैनन् वा भाइरल हुँदैनन् त्यस्तै, शेयरबजारमा पनि बुलिश ट्रेन्डमा सबै सूचकिृत कम्पनीहरूका शेयर लगानीकर्तामाझ चर्चामा रहँदैनन् । जेजति कम्पनीका शेयरको माग अधिक हुन्छ, कारोबार अधिक हुन्छ र मूल्य अत्यधिक बढ्छ, तिनै कम्पनीका शेयर मात्र चर्चाको शिखरमा रहन्छन् ।
गैरबैंकिङ क्षेत्रले नेतृत्व गरेको यो बुलिश प्रवृत्तिको आयु कति हो र कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो अनुमान गर्न गार्‍हो छ ।
बुलिश प्रवृत्ति (ट्रेन्ड)
प्रायः शेयरबजारले अघिल्लो सर्वाधिक उचाइ बिन्दुलाई पार गरेपछि बुलिश प्रवृत्तिमा गएको भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, सूचीकृत सबै कम्पनीका शेयरको मूल्यमा भारी वृद्धि हुन्छ भन्नेचाहिँ हुँदैन । केही त्यस्ता कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा भएको भारी वृद्धिकै कारणमात्र समग्र शेयरबजारमा बुलिश प्रवृत्ति तय भएको हुन्छ जुन यसपालिको बुलिश बजारमा पनि देखिएको छ । शेयरबजार चक्रमा आउने हरेक बुलिश प्रवृत्तिमा एउटै कम्पनीका शेयरले वा एउटै समूहले नेतृत्व गर्छ भन्ने हुँदैन । हालसम्म देखिएका बुलिश बजारहरूमा फरक फरक कम्पनी र समूहले नेतृत्व गरेको पाइन्छ । जस्तो कि यस अघिको बुलिश प्रवृत्तिमा बैंकिङ क्षेत्रले नेतृत्व गरेको थियो भने हाल गैरबैंकिङ क्षेत्रले नेतृत्व गरेको देखिन्छ । समग्र शेयरबजारको आधारभूत विश्लेषणको नतीजा हेर्ने हो भने त्यति धेरै बलियो देखिँदैन । तर, शेयरबजारको लय वा प्रस्तुति भने उत्कृष्ट रहेको देखिन्छ । यद्यपि यो कमजोर धरातलमा कायम भएको बुलिश प्रवृत्तिलाई बजार चक्रले निकै बलियो साथ दिएको पनि हो भन्न सकिन्छ । हाल शेयरबजारलाई कुनै पनि आर्थिक अवस्था वा राजनीतिक अवस्थाले खासै फरक नपेरको आभास भइरहेको छ । अधिक तरताको प्रभाव, प्रविधिगत सहजताको प्रभाव र कारोबार वृद्धिको प्रभावले मात्र यो बुलिश प्रवृत्तिलाई ढाडस मिलेको हो वा अन्य अरू केही कारण छ त्यो स्पष्ट देखिँदैन । जेहोस् शेयरबजार बढेको अवस्थामा कतिपय कम्पनीका शेयर लगानीकर्तामाझ निकै चर्चाको शिखरमै पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले ती शेयरलाई मैले यस आलेखमा ट्रेन्डिङमा परेका वा भाइरल भएका भनेको छु ।
ट्रेन्डिङमा परेका १० कम्पनी
विसं २०७७ असार १५ गतेको नेप्से परिसूचक ११८८.७१ लाई न्यून बिन्दुको आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म शेयरबजार नेप्से परिसूचक २२०० बिन्दुसम्म आइपुग्दा यो ६ महीनाको अवधिमा जहाँ परिसूचक १०११ अंकले वृद्धि भइसकेको देखिन्छ । यो अवधिमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये धेरै कम्पनीका शेयर मूल्यमा चढाव आएको छ । तीमध्ये १० कम्पनीको शेयर यो बुलिश प्रवृत्तिमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अधिक कारोबार भएर धेरै लगानीकर्ताको रोजाइमा परेकै कारण ट्रेन्डिङमा चर्चामा रहेका छन् भन्न सकिन्छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सबैभन्दा ज्यादा मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ । प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) गरेर गत २०७७ जेठ २८ गते मात्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको यो कम्पनीको २०७७ असार १५ गते प्रतिकित्ता शेयर मूल्य रू. ३८२ भएकोमा २०७७ पुस २३ गते प्रतिकित्ता रू. १८३६ सम्ममा कारोबार भएको छ । १० अर्ब चुक्ता पूँजी भएको यस कम्पनीको अहिलेसम्म बजार पूँजीकरण रू. १ खर्ब ५४ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । यो अवधिमा कम्पनीको मूल्यवृद्धि ३८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको पाइन्छ ।
हिमालयन डिस्ट्रिलरीको शेयर मूल्य यस अवधिमा प्रतिकित्ता शेयर मूल्य रू. १३२५ बाट बढेर अधिकतम मूल्य रू. ५६०७ सम्म पुगेको छ । ५० प्रतिशत बोनस शेयर र ५० प्रतिशत नगद लाभांशको दर्ता किताब बन्द (बुक क्लोज) भएर मूल्य समायोजन भए पनि यस कम्पनीको शेयर मूल्य २०७७ पुस २२ गतेसम्म पुनः प्रतिशेयर मूल्य रू. ४१९२ मा कारोबार भएको छ । यो अवधिमा यस कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि ३२३ प्रतिशतभन्दा बढीले भएको पाइन्छ शिवम् सिमेन्टको पनि यस अवधिमा प्रतिशेयर मूल्य रू. ५०० बाट वृद्धि भएर अधिकतम मूल्य रू. १६४० सम्म पुग्दा २२८ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयर मूल्य पनि यस अवधिमा प्रतिकित्ता मूल्य रू. २४९४ बाट वृद्धि भई अधिकतम मूल्य रू. ७००० सम्म पुगेको छ । १९ करोड १९ लाख मात्र चुक्ता पूँजी भएको यो कम्पनीको मूल्य पनि यस अवधिमा १८० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ । व्यापार समूहको विशाल बजारको शेयर मूल्य यस अवधिमा प्रतिशेयर मूल्य रू. १५५० बाट वृद्धि भई मूल्य रू. ४३४५ सम्म पुगेको छ । पुगनपुग ५० करोड चुक्ता पूँजी भएको यो कम्पनीको शेयर मूल्य पनि यस बुलिश प्रवृत्तिमा १८० प्रतिशतभन्दा ज्यादाले वृद्धि भइसकेको छ । सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको शेयर मूल्य रू. २०७० देखि वृद्धि भई रू. ५७४९ सम्म पुगेको देखिन्छ । १ अर्ब ६४ करोड चुक्ता पूँजी भएको यस कम्पनीले ३ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनकै लागि ८२.८४ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न बुकक्लोज गरी मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । यस अवधिमा यो कम्पनीको पनि शेयर मूल्यमा १७७ प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । लामो समयदेखि निकै सुस्ताएको समूह जलविद्युत् समूहअन्तर्गतको माथिल्लो तामाकोशीको शेयर मूल्य पनि यस अवधिमा १५६ प्रतिशतले वृद्धि हुनु यो समूहकै लागि निकै सुखद क्षण हो । १० अर्ब चुक्ता पूँजी भएको यो कम्पनीको परियोजना लागत बढेर दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने आयोजना सम्पन्न हुने म्याद पटकपटक थप हुँदै गइरहेकाले कहिले सम्पन्न हुने हो ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । बीमा समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य पनि यस अवधिमा निकै वृद्धि भएको पाइन्छ । प्रतिशेयर मूल्य रू. १०७० बाट वृद्धि भई रू. २५८६ सम्म पुगेको यो कम्पनीले ३१ प्रतिशत बोनश शेयर २० प्रतिशत नागद लाभांश घोषणा गरेको छ । यो अवधिमा १४१% भन्दा ज्यादाले शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ । यस बुलिश ट्रेन्डमा बैंकिङ समूहको खासै ठूलो भूमिका नदेखिए तापनि नबिल बैंकको शेयर यस अवधिमा प्रतिशेयर मूल्य रू. ६६० बाट वृद्धि भएर अधिकतम रू. १५६० सम्म पुगेको छ । सर्वोत्कृष्ट बोनश शेयर दर ३३.५% दिएर लगानीकर्ताको निकै हाइहाई कमाएको यो कम्पनीको बोनस शेयर मूल्य समायोजन भइसकेको छ । यसरी हेर्दा बैंकिङ समूहको मूल्य वृद्धि नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस अवधिमा यो कम्पनीको शेयर मूल्यमा १३४% भन्दा बढीले वृद्धि हुनु समग्र समूहकै नाक धानेको जस्तो देखिन्छ । बैंकिङ समूहअन्तर्गत रहेको अर्को कम्पनी हो, एनआईसी एशिया बैंक जसको शेयर मूल्य यस अवधिमा प्रतिकित्ता मूल्य रू. ४६९ बाट वृद्धि भएर रू. ९२० सम्म पुगेको छ । नबिलपछि समूहकै नाक जोगाउँदै आएको यो कम्पनीको शेयर मूल्य पनि यस अवधिमा ९६% ले वृद्धि भइसकेको छ । १९% बोनस शेयर दिएर बैंकिङ क्षेत्रमा अग्र स्थानको दोस्रो पंक्तिमा उभिएको यस कम्पनीले पनि यस अवधिमा निकै चर्चामै रहिरहेको पाइन्छ । त्यसैले यी कम्पनीका शेयर लगानीकर्तामाझ ट्रेन्डिङमा परेका हुन् ।
यसपालिको बुलिश प्रवृत्ति विगतको भन्दा फरक किसिमको छ । गैरबैंकिङ क्षेत्रले नेतृत्व गरेको यो बुलिश प्रवृत्तिको आयु कति हो र कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो अनुमान गर्न गा¥हो छ । तर, शेयरबजार यसरी वृद्धि भयो कि यो अवधिमा खासै ठूलो करेक्शन कुनै खुड्किलामा पनि भएको छैन । अर्थतन्त्र जे होस्, व्यवस्था र अवस्था जस्तोसुकै होस् त्यसको कुनै पर्वाह नगरी यसरी बजार वृद्धि हुनु पुराना लगानीकर्ताले त कमाइरहेकै हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ बुलिश प्रवृत्तिको उच्चतम बिन्दु भएको समयमा बजार प्रवेश गर्ने नयाँ लगानीकर्ताका लागि भने निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।